Ogaden News Agency (ONA) – Faahfaahin dheeraad ah iyo Sawiro Qaali ah – Banaanbaxii Geneva
Faahfaahin dheeraad ah iyo Sawiro Qaali ah – Banaanbaxii Geneva
Banaanbax aad u culus oo ay isugu yimaadeen boqolaal ka socda jaaliyadaha Ogaadeenya ee Yurub ayaa ka dhacay xarunta Qaramada Midoobay ee Geneva horteeda. Jaaliyadaha Soomaalida Ogaadeenya ee ka kala socday wadamada UK, Norway, Denmark, Finland, Sweden, Germany, Holland, Belgium iyo Swizterland ayaa si aan loo kala harin uga qeeyb qaatay banaanbax oo ku soo aaday xili xarunta Qaramada Midoobay ee Geneva oo ka furmay shirkii Human Rights Council oo ay xaadir ku ahaayeen dhamaan wadamada xubnaha ka ah Qaramada Midoobay.
Jaaliyadaha Yurub ayaa banaanbaxa ku muujinayay dhibaatada guneeysiga madoow ku hayo shacabka aan waxba galabsan ee ku hoos jira gumeeysiga itoobiya. Banaanbaxayaasha ayaa ku dhawaaqayay hadalo lid ku ah jiritaanka taliska arxanka daran. Banaanbaxa ayaa si aan caadi aheen u soo jiitay madaxda shirka ka qeeyb galeeysay oo ay halkaa gacanta u galiyeen qoraalo ay ku xusan tahay dhibaatooyinka ka jira dalka Ogaadeenya.
Waxaa goobta soo buux dhaafiyay wariyayaasha ka hoowl gala UNta. Saraakiisha Qaramada Midoobay ayaa kulan gaar ah la qaatay xubno jaaliyadaha matalayay iyagoo loo gudbiyay tacadiyadii ugu danbeeyay ee gumeeysiga iyo daba dhilifyadiisa ka geesteen Ogaadeenya. Banaanbaxa ayaa daba socda dadaalo badan oo ay jaaliyadahu sanooyinkii tagay si isdaba joog ah u fulinayeen iyagoo wacad ku maray in ay ka miro dhalin doonaan hadafka umada Ogaadeenya oo ah in ay iska tuurto heeryada gumeeysiga.
Dowlada gumeeysatada madoow ayaa tuke canbaar leh ka noqotay xarumaha Qaramada Midoobay iyo Midowga Yurub-ba iyadoo doowlado, heeyado iyo ururo caalami ahba gacanta ku hayaan cadeeymihii in badan la raadinayay ee ka marqaati kacaya gabool falka gumeeysigu u geeysanayo shacabka Ogaadeenya. Cadeeymaha u gacan galay heeyadaha Qaramada Midoobay ayaa xaqiijinaya in gumeeysiga itoobiya xasuuq, dhac, kufsi, gubida tuulooyinka iyo xadhig qeeyru sharci ah ku la kacayo shacabka. Danbiyo dagaal iyo danbiyo xuquuqda aadanaha ayeey gumeeysiga madoow ka fuliyaan Ogaadeenya sidaase waxaa cadeeyay masuuliyiintii lala kulmay oo sheegay in danbiyadani aanay ahaan doonin kuwa la hilmaamo.
Ujeedada banaanbaxa ayaa ahaa in dunida loo muujiyo isku duubnida shacabka Ogaadeenya iyo sida diyaarka ugu yihiin in ay soo dhacsadaan xuquuqahooda dhamaan oo ay ka mid tahay xaqa aayo ka talinta. Diblomaasiyiinta reer galbeedka ayaa aaminsan in dhibaatada Ogaadeenya gaaray heer ka sareeysa tii Daarfuur qadiyadani tahay mid si qaas ah indhaha ugu hayaan dunida iyadoo ay cadaatay in gumeeysigu uusan dooneen in xal wada hadal ku yimid laga gaaro arintan.
Afduubkii saraakiisha JWXO ee wadahadalada u joogay Nairobi iyo ugaarsiga shacabka Ogaadeenya ee Afrikada Bari ayaa tusaale u ah in gumeeysiga uusan dooneen xalinta dhibaatada uu gobalka ka abuuray. Qadiyada Ogaadeenya ayaa noqotay mid gudaha iyo dibada isku xiran guulo diplomaasiyadeedna soo hoyiyeen jaaliyadaha dibada.
Xarumaha UNta ayeey Ogaadeenya noqotay mida loogu hadal heeynta badan yahay iyadoo Itoobiya ka caagtay in ay soo haweeysato goobaha diplomaasiyiinta qaramada Midooobay ku kulmaan goobahaa oo ay si firfircoon uga hoowl galaan Diasporada Ogaadeenya. Banaanbaxa oo subixii hore ka dhacay xarunta UNta horteeda ayaa galankii danbe u wareegay xarunta Xuquuqul Insaanka hortiisa. Xubnaha jaaliyadaha ayaa ku balamay in ay gumeeysiga kaga horeeyaan kagana danbeeyaan goob walba oo qadiyada Ogaadeenya dani ugu jirto.